नअस्ताउने नारायण गोपाल « LiveMandu
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार ०९:५६
पुरानो जमानामा अटो भनेंर साथीहरुको डायरी भर्ने चलन थियो, अहिले के छ कुन्नी ? मनपर्ने गीत र गायकका ठाँउ छपक्कै नारायण गोपालले लिएका हुन्थेँ । स्वरसम्राट नारायण गोपाल नेपाली वार्तालाप र संवादहरुमा आज पनि बिभिन्न कुराहरुको बिम्ब बनेर आइपर्दछन् । सन् १९९० मा डिसेम्बर ५ अर्थात मसिंर १९ मा नारायण गोपालले धर्ति छाडे तर अमुल्य श्रृजनाहरु दिएर गए जुन आज पनि दुरुस्तै बजिरहेको छ ।
आफ्ना जीवनकालमा कूल १३७ गीत गाएका नारायण गोपालले आफ्ना शुरुवाती गीतहरु मीत्र प्रेम ध्वज प्रधान र गुरु मणिक रत्नको संगीतमा गाए । नेपाली संगितको क्षेत्रमा नारायण गोपाल २० औं शताव्दीका सर्वाधिक खारिएका आवाज र श्रष्टा मानिन्छन्, भेडा सिंह टोलमा मण्कि रत्न, प्रमेध्वज प्रधान संगै हिन्दी गीत सुसेल्ने अनि हार्मोनियम फिट्ने नारायण गोपाल नेपाली संगितका यस्ता कालजयी आवाज भए कि आज यिन्को मृत्युको २९ वर्ष बढि भइसक्दा पनि यिनका श्रृजना र आवाजको तारिफ गरेर कोहि थोकेका छैनन ।
रत्न शम्शेर थापा जो आज पनि हुनुहुन्छ, वहाँका ६ वटा कन्टेम्पोरेरी गीतहरु नारायण गोपालले कंपोज गरे, शुरुवाती दिनमा । यि ६ वटै गीतले तहल्का पिटे जस्मा गीतहरु स्वर्गकी रानी, आँखाको भाका आँखैले, भो भो मलाई नछेक, मधुमास यो दिलमा जस्ता गीतरु पर्दछन् । केहि गीतका रेकर्डिगंहरु हामीले नसुनेका पनि हुनसक्दछौं तर ति एतिहासिक ध्वनीलाई संरक्षण गर्दै जनमानसमा ल्याउने जर्मको भनें कतैबाट भएको पाइन्न, यो दुर्भाग्य हो ।
त्यसपछि डुएट गीतहरु जस्तै बिछोडको पिडा र ए कान्छा ठट्टैमा यो बैस जस्ता गीतले त झन नेपाली मौलिक गीत र आधूनिक संगित बिचको पूल नै बनेंर काम गर्यो ।
स्मरण रहोस् यी गीतहरु सबै कोलकातामा रेकर्डिगं गरिएका थिए । राना शाषनबाट छुटेको नेपाल अनि राजा शाषनमा घरिघरि ढल्मलाएको नेपाली प्रजातन्त्रको अभ्यासमा नारायण गोपालको समय बित्यो, यि सामाजिक अनि राजनैतिक परिवर्तनका केहि प्रतिबिम्बहरु यिनको गीतमा पाइन्छ ।
जाग लम्क चम्क हे नौजवान हो गर्दै नारायण गोपालको सांगितिक आव्हान आज पनि उत्तिकै दुरुस्त र चुस्त सुनिन्छ । नारायण गोपालको उतिबेलाका निकटहरुमा भूपी शेरचन, ईश्वर वल्लभ, गोपाल योञ्जन, दिव्य खालिगं र भीम बिरागहरु पर्दछन् । हैटौंडाका भीम बिरागको गीत तिमीले पनि म जस्तै माया दिएर हेर आफ्नै कम्पोजमा गाएका हुन् । यो गीत अत्यन्त अब्बल दर्जाको छ भनें भावना र संगितको सिन्क को त कुरै छाडौं, आज पनि परिवेश र भावनाको बाढी ल्याउने गर्दछ नारायण गोपालका ३ देखि ४ दशक पुराना गीतहरुले ।
आजभोली हरेक साँझ मातिन थालेछ, नारायण गोपालले यो गीत यसरी गाए कि मानौं यिनी आफ्नै साँझहरु वर्णन गर्दैछन् । गोपालका साँझहरु त्यस्तै थिए, यिनको निलो रंगको मोटरसाइकल घाम अस्ताँउदा कुनै मदिरा पसल अघि रोकिएको हुन्थ्यो कि न नक्शाल या किर्तिपुरको होस्टलमा । यिनको यहि बैठारीमा नेपालले अनेकन गायक र संगितका तृष्णा भएका सर्जकहरु पायो, नारायण गोपाल एउटा मियो थिए अनि जोड्दै जान्थे साथहरु । आफ्नो मदिरा र संगित दुबैलाई यिनले जमेर माया गरे, संगितले यिनलाई अमर बनायो अनि मदिराले अकालमै लिएर गयो । हुन त अमर को नै पो छ र ?
नारायण गोपालको शालिकले अब गाउने कुरै भएन, नारायण गोपालको यादहरु अब चलायमान सर्वत्र छ । चलचित्र दक्षिणाको गीत गाँउदा नारायण गोपालले ख्याल ख्यालमा नै आइसक्रिम मगाएर एक केजी आइसक्रिम खाएर स्टुडियो पसे । यो मुटुलाई कसरी संझाँउ बुझाँउ वोलको यो गीतमा नारायण गोपालको ओकी पनि राखिएको छ । गीत पछि यिनलाई चिसो लाग्यो, धुम्रपानको पनि शोखिन नारायण गोपालको शायद यहि गीतनै अन्तिम रह्यो क्यारे ।
फाँटहरुले कस्लाई पुग्छ भीरमा पनि फुलिदिन्छु भन्ने नारायण गोपाल आज हामी माझ छैनन तर गीतहरुको संगालो सदैव रहनेछ । सके फेरि यो देशमा जन्मनु है नारायण गोपाल ।